Coral Reef: ယွန်းခဲ့သည် အရှေ့စွန်း နေ၀န်း၏ ကျွန်းမြေဆီ (၂)
ညီလင်းသစ် said on November 15, 2012 at 1:54 AM
ဓါတ်ပုံတွေ အရမ်းလှတယ် ဇွန်....၊ ဘက်ထရီ အတုံးလေးတွေ တတိတိ လျော့ကျလာတဲ့ ကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်ထားပေမယ့် ရှုခင်းတွေရဲ့ အလှကို ခံစားလို့ ရပါတယ်၊ ဂျပန်မှာက အဖက်ဖက်မှာ ပြောစရာတွေ၊ ကြည့်စရာတွေ ကုန်နိုင်မယ် မထင်ဘူးနော်..၊ ဂဏန်းပေါင်းစက်ကို ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စည်းရုံးမှုနဲ့ ပါသွားတဲ့ ခရီး ဆိုပေမယ့် ဒီရှုခင်းတွေကို လည်ပတ်နေချိန်မှာ တကယ်လာသင့်တဲ့ ခရီးပါတကားလို့ ဇွန် တွေးနေခဲ့မယ် ထင်တယ်နော်..၊း)
ဟိုဖက်ပြေးလိုက်၊ ဒီဖက် ပြန်ပြေးလာလိုက်နဲ့ ဖတ်ရတဲ့ ခရီးသွား ဆောင်းပါးလေးပေမယ့် ရှုခင်းတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက မမောနိုင်၊ မပန်းနိုင် ဖမ်းစားထားတယ်၊ အခုလည်း ဘယ်မှာ လိုက်ဖတ်ရမယ်မှန်း မသိသေးတဲ့ အပိုင်း ၃ ကို စောင့်နေမယ်ဗျို့ ...။း))
Anonymous said on November 15, 2012 at 6:03 AM
မေပယ်လ်ဆို ကနေဒါအလံမှာ ပါတဲ့အရွက်လို့ပဲသိထားတာ။ ဂျပန်က မေပယ်လ်ရွက်ကတမျိုးနော်။
mstint said on November 15, 2012 at 3:43 PM
ဓာတ်ပုံတွေလှလိုက်တာ ဇွန်ရေ။ လူလိုပဲ :P အခုတော့မြင်ဘူးသွားပြီဆိုတော့ ပြောနိုင်ပြီလေး)
အဲဒီလိုခရီးမျိုးကို အချိန်ပေးပြီး အေးအေးဆေးဆေး အလည်သွားချင်တယ်။ မေပယ်လ်အရွက်လေးတွေ အရင်က မြင်ဘူးတာကြာပြီ အခုမှနာမည်သိတော့တယ်း) စိတ်ရှည်စွာနဲ့ ခရီးစဉ်လေးရေးသားသွားတာ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ကျေးဇူးပါနော်။
မိုးနတ်ကြယ်စင် said on November 15, 2012 at 7:15 PM
ကိုယ်တိုင်မသွားရပေမဲ့ သွားတဲ့သူက ပြန်ဝေမျှပေး
နူးရတာ..ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့ရတဲ့ မမဆို ပိုလို့တောင်
ကြည်နူးဝမ်းသာနေမှာနော်..ပြီးတော့လဲ ကိုယ်ငယ်ငယ်ကတည်းက သိပ်သွားချင်ခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်လား...
( ၃ ) ကိုမျှော်နေမယ်နော်မ....
ဟုတ်..မမ..ညလေးကို ဆေးနံမည်လေးမေးပေးပါနော်...ချစ်တဲ့ ညလေးမိုးနတ်
ဇွန်မိုးစက် said on November 16, 2012 at 9:41 PM
အတိအကျပါပဲ... ကိုညီလင်းရေ... လာသင့်တဲ့ ခရီးတစ်ခုလို့ တွေးခဲ့မိတာလေ။း)
ဟုတ်ပါတယ် အမည်မသိ စာဖတ်သူ။ ဇွန်လည်း သတိထားမိတယ်။ ဂျပန်က မေပယ်လ်အရွက်က ကနေဒါအရွက်ပုံစံနဲ့ မတူဘဲ ကွဲပြားနေတယ်။ ဂျပန်မှာပဲ နောက်ထပ် သဏ္ဍာန်ကွဲတဲ့ အရွက်မျိုးတွေလည်း တွေ့ခဲ့သေးတယ်။
ကျေးဇူးပါ တီတင့်ရေ။ တီတင့်လည်း ထင်ထားထက် အပြင်မှာ အများကြီး ပိုနုပျိုနေလို့ အံ့သြနေတာ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လာဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်။း)
ညီမမိုးနတ်ကြယ်စင်ရေ... motion sickness ဆေးနာမည်တွေက အောက်ကအတိုင်းပါ။ လိုအပ်ရင် B6 နဲ့ပါ တွဲပြီးသောက်လို့ရတယ်။ ခရီးမသွားခင် တစ်လ၊ ဒါမှမဟုတ် သုံးပတ်လောက်ကတည်းက ကြိုပြီးသောက်မှ အာနိသင်ရှိတယ်နော်။
Stugeron --> once at night
Stematil --> twice per day
အပိုင်း (၃) ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြမယ့် စာဖတ်သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
Shinlay said on November 16, 2012 at 11:35 PM
မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာကို လိုက်လည်ခွင့်ရလို့ 
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇွန်။ အပိုင်း၃ စောင့်နေမယ်။
ဇွန်မိုးစက် said on November 18, 2012 at 10:08 PM
ခရီးသွားတိုင်း အမြဲလိုက်ပေးတဲ့ အစ်မရှင်လေးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပိုင်း (၃)ကို ညိုလေးနေက ဆက်ရေးထားပါတယ်။း)
Sint Si said on December 11, 2012 at 4:03 PM
The close up picture of red leave is not maple. Maple leave has3sharp points. Japanese maple leave is smaller than maple that we see in USA or Canada.
Anonymous said on April 4, 2013 at 4:15 PM
Hi sis,We are going to japan on next week and interested to buy this one day tour to nikko. I would like to know from which website you bought this tour package and cost how much.
ဇွန်မိုးစက် said on April 4, 2013 at 4:26 PM
Hello, sis! We bought the Nikko one day tour package from City Discovery website. Please kindly look at below link:
The price is stated in USD.
ဇွန်မိုးစက် said on April 4, 2013 at 4:36 PM
Hi Sint Si, Thanksalot for the clarification. As we never saw Maple leave in person before, we thought it isaMaple leave. But I remember the real Maple tree as per your comment, where we could haveachance to take picture with red maple tree at Nikko. :-)
Anonymous said on April 5, 2013 at 9:02 PM
Thank your for your info sis